China Weather eguzogide ọgwụ Steel efere Manufacturer na Supplier | Kunda
A ga-ekpughere Nchara igwe na ikuku na ikuku na-enweghị eserese. Ọ na-amalite nchara nchara n'otu ụzọ ahụ dị ka nchara nkịtị. Ma n'oge na-adịghị anya, ihe ndị na-eme ka mmiri dị na ya na-eme ka elu ajị anụ dị nchara na-etolite, si otú a na-egbochi ọnụego corrosion.
Igwe igwe na-ekpuchi ihu na-egosipụta ezi nguzogide mmebi karịa nchara nkịtị, o nwere obere ngwongwo alloy anaghị amasị igwe anaghị agba nchara na ọnụahịa ya dị ọnụ ala karịa igwe anaghị agba. Igwe igwe na-eme ka ihu igwe na-enyere aka belata ọnụahịa ndụ na nsogbu gburugburu ebe obibi n'ọtụtụ ngwa.
A na-eji nchara ahụ maka ụdị dị iche iche nke welded, bolted na riveted arụ dịka ihe owuwu ígwè, àkwà mmiri, tankị na arịa, usoro kpochapu, ugbo ala na akụrụngwa akụrụngwa.
Nguzogide ihu igwe na ndeksi arụmọrụ
Ekwe Ike N / mm²
Ike ọdụdọ N / mm²
0,3 mm-2 mm (oyi akpọrepu)
2 mm-50 mm (ọkụ akpọrepu)
eriri igwe ma ọ bụ dịka ịchọrọ ogologo
Eriri igwe: 4/6/8/12 * 1500/1250/1800 * Ogologo (ahaziri)
Efere: 16/18/20/40 * 2200 * 10000/12000
Nke gara aga: Igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Osote: Eyi eguzogide ọgwụ Steel efere